Cannabis Kubvumirana & Zvinodiwa Gweta Mune Peoria | Thomas Howard
Mbeu yekutengesa yeCannabis- Kuteerana & Zvinodiwa
Iyi indasitiri ye cannabis ichiri mudiki, ichive yakanyoreswa zviri pasi pemakore makumi maviri apfuura. Izvi zvinogona kungoreva kuti musika uri kukura uye uchibuda pachena nenzira inoshamisa. Ipo kukura uku kwaive neimwe nzira kusingadzorekere munguva yakapfuura, hurumende yapinda mukati, uye nhasi, indasitiri ye cannabis iri pakati pezvakanyanya kugadzirwa maindasitiri.
Neyemutemo, vatambi vakuru vauyawo muindasitiri nekuti zviri pachena kuti munda we cannabis indasitiri inobhadhara zvikuru. Zviratidzo zvese ndezvekuti musika ucharamba uchikura nekukurumidza, uye vanoisa mari muindasitiri ino vacharamba vachikohwa zvikuru mumakore anotevera.
Nezve Mbeu Kutengesa
Mbeu iyi yekutengesa yakagadzirwa zvichitevera zvimiro zvitsva zvehurumende nematunhu akasiyana izvo zvaida kuti varimisi vatevedze zvavakawana. Mbeu yekutengesa sisitimu inoita kuti vanogadzira vazive chaizvo kwazvakagadzirwa uye kwainoenda. Izvi zvinobatsira kusangana nezvinodiwa panguva imwe zvichiita kuti zvive nyore kwavari kugutsa zvinodiwa nevatengi.
Kutenda kune aya masisitimu, vatengi vanowana ruzivo rwakakwana pamusoro peiyo dhadha uye yakazara mhando yechigadzirwa chekupedzisira. Uye zvakare, zviyero zvinosanganiswa nembeu kutengesa sisitimu kuti zvibatsire kuona iyo dosi yakadikanwa pakurapa uye kubata mamiriro akasiyana ekurapa.
Kunyangwe zvirinani, iwo masystems anosanganisira bar-macode anoita kuti zvive nyore kutarisisa chero chigadzirwa kurudyi kubva kumbeu kusvika pakutengesa. Izvi zvinoreva kuti munhu wese kubva kune mutengi kune iye bhizinesi muridzi anogona nekukurumidza kuona mhando yeese cannabis chigadzirwa chavanosangana nacho.
Iwe Unoda Cannabis Kuteerana Gweta?
Kana iwe uri mubhizimusi re cannabis kana kutarisa kuti upinde muindastiri, unoda gweta rekutevera we cannabis. Kunyangwe iwe waita zvakakwana zvemashure macheki, uye kuverenga zvese zviripo kuti uzive nezve indasitiri iyi; pane mukana iwe unogona kupotsa chinyorwa chinogona kuputsa bhizinesi rako.
Nekuda kwekuti mutemo we cannabis wakasiyana kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe, gweta rekuteedzera cannabis ichakubatsira iwe kuti unzwisise mutemo uye zvirevo munzvimbo iyo bhizinesi rako rakavakirwa. Sezvo mitemo ichiramba ichipfuurira, gweta richakuchengeta zvakare pane zvinoitika muindasitiri ino. Nenzira iyi, iwe uchave nenguva iri nyore yekugara kurudyi kwemutemo.
Isu tiri kambani yemutemo yakavakirwa muPeoria, Illinois. Ini zita rangu ndiAugweta Thomas Howard, uye ndinoshanda nechikwata chevamiriri vanonzwisisa mirairo iri muindasitiri ye cannabis. Isu tave mubhizinesi kwemakore mashoma uye takabatsira varidzi vemabhizimusi mu cannabis indasitiri kutanga nekumhanyisa mabhizinesi avo.
Isu tinoda kukutungamidzai pamaitiro ekutanga uye kushanda bhizinesi re cannabis uye kuti iwe unzwisise kuti ndeipi mhodzi yekutengesa cannabis iri pamusoro payo. Isu zvakare tichakutungamira pane kuti ungasanganisira sei mbeu kumutengesi masystem kuti ubatsirwe nebhizinesi rako.
Uine chero mubvunzo pane bhizinesi re cannabis uye zvinodiwa zvemitemo? Bata nesu kuti uwane ruzivo rwakawanda pane izvi uye zvimwe zvakawanda.